पहिलोपटक कुखुराको सौन्दर्य प्रतियोगिता ! - Dhangadhi Khabar
सोमबार ०९, जेठ २०७९ १७:३०
पहिलोपटक कुखुराको सौन्दर्य प्रतियोगिता !
लिबियाको राजधानी ट्रिपोलीमा एक अनौठो र आश्चर्यजनक समारोह आयेजना गरिएको छ । यस कुखुराको सौन्दर्य प्रतियोगिता कार्यक्रमले देशभरबाट धेरै सहभागी र अतिथिहरुलाई आकर्षित गराएको छ ।
समारोहमा उपस्थित भएका टेहेर बेल्कासेमले रोयटर्ससँग कुनर गर्दै आफूले यस किसिमको कार्यक्रम पहिलोपटक अनुभव गरेको बताए । उनी भन्छन्, “मैले यसअघि साधारण कुखुरा मात्र देखे सुनेको थिएँ । यो वास्तवमै एकदम उल्लेखनीय सुरुवात हो र आयोजकहरुको सम्पूर्ण प्रयासका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा उच्च स्कोर, ९३.८ ल्याएर विजयी हुन सफल मोहन्नाद जेयेदको ब्रम्मा कुखुराबारे उनले यस्तो भने, “यो कुखुरा यसको ठूलो आकार र पहेँलो खुट्टाका लागि एकदमै प्रख्यात छ । साथै यसका पखेँटा एकदम चमकदार र नरम हुन्छन् ।”
सोमबार ०९, फागुन २०७८ ०१:२८ मा प्रकाशित